သန္ဓေတားဆေးသည်လိင်ဆန္ဒကိုပယ်ရှားသလား။ | Bezzia
အကယ်၍ သင့်တွင်တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်တစ် ဦး ရှိပြီးကလေးမလိုချင်ပါကသင်စတင်စတင်လိမ့်မည် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအထူးသဖြင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်ရင်။ အယူအဆရှိသည့်ဆေးပြားကိုသောက်ရန်အကြောင်းပြချက်သည်ကိုယ်ဝန်မဆောင်လိုသောဆန္ဒထက်များစွာကျော်လွန်နိုင်သည်။ နာတာရှည်ခြင်းနှင့်သွေးထွက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ဆရာဝန်များသည်ကလေးထိန်းဆေးကိုညွှန်းနိုင်သည် အရေပြားပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန် (အလွန်လေးလံသောသွေးထွက်ခြင်းကသွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်) ။
သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသန္ဓေတားဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်ကလေးမွေးဖွားခြင်းကိုတားဆီးရုံတင်မကဘဲ၊ သင့်လိင် drive ကိုဖိ.
လိင်စိတ်တိုက်ဖျက်ရေးဆေးများစားသုံးခြင်းနှင့်လibidoမရှိခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောလများအထိကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်ထက်ပိုမိုရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ဆေးကျောင်းမှသုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်ဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေသည် "လိင်ဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်", ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသောသူများသည်သူတို့၏လိင်စိတ်ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်လျှော့ချနိုင်သည်ဟုကောက်ချက်ချကြသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆေးတွေကလိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ဟော်မုန်း - testosterone ဟော်မုန်း - ကိုလျော့နည်းစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီလေ့လာမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနဲ့အတူအမျိုးသမီး ၁၂၄ ယောက်မှာလေ့လာခဲ့ကြပြီးသူတို့ထဲကတစ်ဝက်ကတားဆေးကိုသုံးတယ်၊ ၃၉ ကရပ်လိုက်တယ်၊ ၂၃ ကတစ်ခါမှမသောက်ဘူး။
ဤသုတေသန၏ရလဒ်အနေဖြင့်ပါးစပ်ဖြင့်သန္ဓေတားဆေးသုံးစွဲသူများသည် testosterone ဟော်မုန်းနည်းနေကြောင်းဖော်ပြသည်။ နှင့်ဘယ်တော့မှတစ်ခါမျှမစားဖူးသူများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသော SHBG (လိင်ဟော်မုန်းနှင့်ဆက်စပ်သော globulin) ထက် ၄ ဆနီးပါးပိုများသည်။ ကုသမှုကိုဆိုင်းငံ့ထားသောအမျိုးသမီးများသည်သန္ဓေတားဆေးမထိုးဖူးသူများထက် SHGB အဆင့် ၂ ဆပိုများသည်။
ဤအချက်အရဆေးယဉ်ပါးမှုကိုတားဆီးသည့်အခါ SHBG အဆင့်ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းကြောင့် testosterone ဟော်မုန်းနည်းသွားသည်။ အကျိုးဆက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတွက်ကျဆင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒါပေမယ့်ကိုယ်ခန်ဓာကိုယ်စီဟာကမ္ဘာကြီးဖြစ်ကွတယ်၊ ငါပြောခဲ့တဲ့လေ့လာမှုကိုပဲကြည့်ပါမိန်းမတွေဒီအချက်အလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေရှိနိုင်တယ်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏သက်သေခံချက်ကိုကျွန်ုပ်ဖော်ပြပါမည်။
“ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ (ငါတို့အားလုံးပါးစပ်တားဆေးထိုးတာကိုခံယူတယ်) ပြောတာကမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်တွေကဘာကြောင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ်မမြင်တာလဲလို့ကျွန်တော်တို့တွေးမိတယ်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ချင်းစီတွင်ဆေးပြား၏သက်ရောက်မှုများသည်ကွဲပြားခြားနားစွာပြုမူသည်ဟု ၄ င်းတို့ကသူတို့၏လိင်ဆန္ဒကိုလျှော့ချသောအချို့သူများရှိသော်လည်းအချို့မှာမူမတူညီကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
သန္ဓေတားဆေးတွင်မည်သည့်ဆေးဝါးများအလုပ်လုပ်သည်ကိုမသိသောအမျိုးသမီးများအတွက်၊ သန္ဓေတားဆေးသည်အမျိုးသမီးလိင်ဟော်မုန်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းကိုသတိရသင့်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုမှာ testosterone ဟော်မုန်းအပါအ ၀ င်အန္ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဟန့်တားသောကြောင့်၎င်းသည်မိန်းမသားဥအိမ်များတွင်။ အန်ဒရိုဂျင်သည်လိင်မှုကိစ္စကိုပျော်ရွှင်စွာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။
သငျသညျသန္ဓေတားဆေးကိုယူ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလျော့နည်းလာသတိထားမိလျှင်, သူတို့ကိုယူပြီးရပ်တန့်မထားပါနဲ့။ အခြားသန္ဓေတားနည်းများကိုကြည့်ရန်သင့်မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ဆရာဝန်များစွာသည်စိတ်ခံစားမှုသည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတွင်လည်းအလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ကြောင်းနှင့်လိင်ဆန္ဒကိုလျှော့ချနိုင်သည့်မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးပြားများသာမဟုတ်ကြောင်းငြင်းခုံကြသည်။ လိင်ကြင်ဖော်ဖက်နှင့်စိတ်အခြေအနေပြandနာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြlibနာများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက် ပို၍ အရေးကြီးသည် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏနည်းနည်းပြောင်းလဲတာက
အမျိုးသမီးများအဖို့၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမရှိခြင်းအတွက်မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ဆေးပြားများကိုအပြစ်တင်ရန် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ ဆက်ဆံရေးတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများရှိပါကလိင်ဆန္ဒသည်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည်။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုလိင်မှခွဲထုတ်ရန်ခက်ခဲသည် ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အဆင်မပြေပါကသင်သည်လိင်ကိုစိတ်မဝင်စားပါ။ ထို့အပြင်မိခင်များဖြစ်ကြပြီးသူတို့လိုချင်သောဝတ်စားဖြီးလိမ်းရန်အချိန်မရှိသောကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုကင်းမဲ့သည်ဟုခံစားရသောအမျိုးသမီးများသည်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှာပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုခံစားကြရဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်အမြဲတမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိသည်၊ ဆွဲဆောင်မှုသည်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၏သဘောထားကို!
အကယ်၍ သင်သည်မွေးဖွားခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည့်ဆေးများကိုသောက်သုံးရမည်ဆိုပါကသင်၏စိတ်ကိုမဖြစ်ပေါ်စေရန်ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုမစဉ်းစားပါနှင့်။ မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောမွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးများသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်သည်။ သင်မလိုလားအပ်သောကိုယ် ၀ န်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူစရာမလိုပါက၊ လိင်သည်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပြီးအလိုအလျောက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
သင်ပြုလုပ်ရန်သင်အကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမှာသင်၏ဆရာ ၀ န်ထံသို့သွားပါက ၄ င်းတို့သည်အမှန်တကယ်သန္ဓေတားဆေးများဟုတ်မဟုတ်အကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာလိုအပ်ပါကသူသည်ဟော်မုန်းနည်းသောဆေးများပေးလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ထဲမှာထားရမယ့်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကခင်ဗျားဟာခင်ပွန်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသောစိတ်ဆန္ဒအမှန်ရှိနိုင်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းအရလုံလောက်တယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် libido ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေသောအခြားဆေးတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ဓာတ်မကျလျှင်သင်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ ဤပြproblemနာကိုမှန်ကန်စွာကုသရန်နှင့်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ကြာမြင့်စွာစကားပြောဆိုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကသဘောတူသည် သင့်ကိုယ်သင်မေးရန်သော့ချက်မေးခွန်းမှာသင်၏ဘဝပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သလား။ ထို မှနေ၍ သင်ဘာဖြစ်နေသည်ကိုတိတိကျကျသိနိုင်ရန်အခြေအနေများကိုစတင်အကဲဖြတ်နိုင်သည်။ ပြtheနာကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည်အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကိုရှာဖွေရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအချက်များအားလုံးကိုသင်စဉ်းစားပြီးပြtheနာမှာမွေးဖွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးပြားကြောင့်ဖြစ်မည်ဟုသင်ထင်နေပါကသင်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်နှင့်စကားပြောနိုင်ပြီးအခြားခေတ္တမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်သည့်နည်းလမ်း (မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးများမှအပ) ကိုစမ်းကြည့်နိုင်သည်။ လူအတော်များများသည်လိင်စိတ်နည်းနေခြင်းကိုတိုင်တန်းကြသည်၊ သို့သော်အားလပ်ရက်တွင်အားလပ်ချိန်၌အားကုန်သွားခြင်းမရှိဘဲတိတ်တဆိတ်ဖြစ်သွားသောအခါထို libido သည်မွေးဖွားခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သောဆေးပြားများနှင့်အတူ (သို့) မပါဘဲပြန်လာတတ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » စိတ်ပညာနှင့်စုံတွဲ » လိင် » သန္ဓေတားဆေးသည်လိင်ဆန္ဒကိုပယ်ရှားသလား။
Anitza ကိုယ်ကျင့်တရား ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်လိင်အရဆန္ဒပြင်းပြမှုလျော့ကျသွားသည်ကိုသတိပြုမိပြီးလွန်ခဲ့သည့် ၄ နှစ်ကဆေးပြားများကိုလွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကသောက်သုံးခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ကြင်ဖော်ဖက်နှင့်ပြproblemsနာအချို့ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်မီးယပ်အထူးကုနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့မည်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမင်းအကောင့်ယူမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Anitza Morales အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆေးပြားတစ်နှစ်လောက်သောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုလိင်ဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒပြင်းထန်လွန်းသဖြင့် Jazmin ကိုကျွန်တော်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူမနှင့်အတူတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုပြောသော်လည်းသူမနှင့်အခြားသူများသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည် ပြနာပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊
ငါ yazmin ယူတာ ၂ နှစ်ရှိပြီ။ ဒါပေမယ့် Mia နဲ့လအတော်ကြာသွားတယ်။ ထူးခြားချက်ကလိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမလိုချင်ဘူး၊ ငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကအရမ်းမကျေမနပ်ဖြစ်ပြီးအမှန်တရားကတော့မပါဘဲထုံဆေးတွေလိုပါပဲ ခံစားရတယ်၊ ပျော်မွေ့နိုင်စွမ်းကျွန်ုပ်သည်ဘာမှမခံစားရဘဲရပ်တန့်သွားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ ကျွန်ုပ်အားဤကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိသောအခြားနည်းလမ်းကိုရှာဖွေတော့မည်ဖြစ်သည်။
ငါဆေးတွေကိုသောက်နေတာ ၄ နှစ်ရှိပြီ။ ငါမှာလိင်အလိုဆန္ဒမရှိဘူး။ ငါချက်ချင်းငါသောက်စေမည်။ သူတို့ကပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်တယ်။
မင်္ဂလာပါမိန်းကလေးများ၊ ကျွန်ုပ်သည် gestynil ကို ၃ နှစ်ကြာသောက်နေခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်လအနည်းငယ်ကြာသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပြproblemsနာများဖြစ်စေသည်။ ငါကသူတို့ကပantibိဇီဝဆေးတွေလို့ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါသားဖွားဆရာမဆီသွားမယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါကငါ့ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာကိုတားဆီးတာအပြင်ကျွန်တော့်ရဲ့အချိန်ကာလကိုထိန်းညှိထားတာကြောင့်သူတို့ကိုစွန့်ခွာသွားမှာကိုငါကြောက်တယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာငါ cyclomex 2008 xa နှစ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်၊ သူတို့ကအချိန်ကာလကိုထိန်းညှိဖို့သာဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် ၁၀၀% အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါစတင်ဆက်ဆံရေးရှိတုန်းကငါ့ရဲ့ရည်းစားကအစမှာငါ့ကိုဂရုစိုက်တယ် သူကနောက်လမှာမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့်အသေးစိတ်ကတော့ဒီအချိန်မှာဆေးလုံးတွေကကျွန်တော့်ကိုဂရုစိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်ကာလကဘောလုံးတွေဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကို miranova x အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ ငါ့ကိုဂရုမစိုက်တဲ့အခါဘယ်လောက်အရူးလဲဆိုတာငါဘာမှမခံစားရဘူး၊ ငါ့ကောင်မလေးလည်းသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းတက်ကြွနေတယ်။ ဟဲလိုပြီးနောက်ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်မီနှင့်၎င်းသည် xanta သည် k aora k ကျွန်ုပ်၏ကံကောင်းခြင်းကိုခံစားခြင်းထက်ဝက်မျှမလှုပ်ရှားပါ။ ၎င်းသည်ရုတ်တရက်ဖြစ်လာမည့်အရာနှင့်ကီလိုမီတာသည်လိင်မှုကဏ္ activity ကိုပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်သည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်အတူတူပါပဲ။ MINIGINOL ကို ၁၁ လနီးပါးကြာအောင်သောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့လိင်ဆန္ဒကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ။ ကျွန်မယောက်ျားကလှတယ်၊ ငါလည်းသူ့ကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်ပေမယ့်မဖြစ်စေဘူး ငါဟာ ၁၅ လအရွယ်ကလေးငယ်လေးပါ။ ဒါပေမယ့်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ သန္ဓေတားဆေးပြောင်းလဲတာဟာငါနဲ့အတူအိပ်ယာမှာအတူတူခြင်္သေ့မတူချင်တဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်၊ ကျွန်မခင်ပွန်းကနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ငါကူညီနိုင်မလား
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ ယခုသူတို့ကိုဆေးသောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ခြင်းဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုပျောက်မသွားပါကအလိုဆန္ဒပြန်လည်ရရှိရန် tetosterone နှင့်အခြားအရာဝတ္ထုများ၏အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
ငါအိပ်ရာထဲမှာအဘယ်ကြောင့်ဤမျှအေးနေသည်ကိုယခုငါနားလည်ပြီ၊ ကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးခဲ့ပါ၊ အမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းအမြဲတမ်းငြီးငွေ့စရာကောင်းသည်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းအားလုံးသည်ကျွန်မယောက်ျားကိုအလွန်ချစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်ကဆေးလုံးကိုသောက်ခဲ့သည်၊ Miranova ကိုယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကဤသို့ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုတစ်ခါမျှမပြောခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုစွန့်ခွာသွားမည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးတစ် ဦး ရှာဖွေနေသည်။ သင်၏မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်မည်မျှကူညီသည်ကိုသင်မသိပါ !!
မင်္ဂလာပါမိန်းကလေးများ၊ ဤအရာကိုပြောရန်အလွန်ဝမ်းနည်းပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ယောက်ျားသည်ကျွန်ုပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်မလိုလားပါ။ ကျွန်ုပ်တကယ်လိုချင်။ အမြဲတမ်းစိတ်ပျက်မိပါသည်။ သူကငါ့ကိုသစ္စာဖောက်တယ်လို့မထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့က ၂ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်၊ ငါတို့အတူတူနေပြီးအတူတူနေတယ်။ တစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ်က ၃ ကြိမ်လောက်လုပ်တယ်၊ ငါ့အတွက်တော့သိပ်နည်းတယ်။ ငါသူ့ကိုအရမ်းချစ်တယ်၊ ငါတို့မှာရှိတဲ့ပြtheနာအားလုံးကဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲ။ အလိုဆန္ဒကိုအများဆုံးဖယ်ရှားပေးသည့်ဆေးဝါးများသည်ကျွန်ုပ်အားမပျောက်စေစေရန်နှင့်သင်ပြောပြလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ငါ norgestrel ကိုသုံးနှစ်လောက်ကြာခဲ့ပေမဲ့တစ်နှစ်၊ တစ်နှစ်လောက်တော့ငါသတိထားမိနေတယ်။ ငါသူတို့ကိုယူတာကိုရပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကအမြဲတမ်းမမှန်ဘူး၊ ဒီဆေးတွေကငါ့ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေဖို့အများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်၊ ငါလာမယ့်လမှာသူတို့ကိုမသောက်တော့တာငါဟာဒါမှမဟုတ်လပေါင်းများစွာလာမှာမဟုတ်ဘူး အချို့လူများနှင့်အတူဖြစ်ပျက်! ငါ့မှာကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ နောက်တစ်ယောက်လိုချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကကျွန်မကိုတော်တော်လေးအဆီချစေပြီးလိင်ဆက်ဆံချင်တယ်။ ငါဘာသောက်တော့မလဲ ????
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်နောက်ထပ်တစ် k သည်ခက်ခဲသောအချိန်ကိုဖြတ်သန်းနေပါသည်။ ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကကျူးဘားကနေကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးတွေကိုငါယူခဲ့ဖူးတယ်၊ သူတို့က Etinor လို့ခေါ်တယ်။ ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာငါရည်းစားနဲ့အတူအိပ်နေတုန်းမှာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူး။ ကျွန်မရဲ့လိင်စိတ်ကိုအစာစားချင်စိတ်ပျောက်သွားတယ်။ ငါလာဖို့ကြိုးစားပေမယ့်ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားပါစေငါမသွားနိုင်တော့ဘူး။ K ကလုပ်နိုင်တယ် ? ငါထင်တာကဆေးလုံးကိုမသောက်တော့ဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကွန်ဒုံးနဲ့ဂရုစိုက်ဖို့ပဲ။
နှစ်နှစ်လုံးလုံးဆေးလုံးတွေသောက်ပြီးယူလာတဲ့ အချိန်မှစ၍ ကျွန်တော်ဘာမှမသိချင်ဘူး! ငါမှာလိင်ဆန္ဒမရှိဘူး၊ ဒါကငါ့ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်စေတယ်၊ ​​သွေးပေါင်ချိန်ကိုကျစေတယ်၊ ​​တက်စေတယ်၊ ကာလမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်ကဆလတ်လိုပဲငါဆရာဝန်ကိုမကြာခဏဖုန်းဆက်ခဲ့ရတယ်။ ပြီးတော့ငါမှောင်မိုက်တဲ့နေရာမှာပဲနေပြီးငှက်တစ်ကောင်တောင်မဆိုနိုင်ဘူး။ ငါနောက်ဆုံးတော့အရက်သောက်ကိုရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်ပြီးဆုံး။ Xq သည်အကြိမ်များစွာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကို Kala md လိုအနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကစျေးကြီးတယ်၊ ငါနဲ့အဆက်အစပ်မရှိတဲ့အတွက်ငါပိုက်ဆံဖြုန်းတီးနေပုံရတယ် လွန်ခဲ့သော ၁၆ လကကျွန်ုပ်သည်သူတို့ကိုစွန့်ခွာပြီးယခုတစ်ဖန်ပုံမှန်ပြန်လာနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကံကောင်းတာကကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကကျွန်တော့်ကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြပြီးနားလည်ပေးခဲ့တယ်။ ... ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်သည်တက်ဘလက်ကိုပြီးအောင်ပြီးမယူရန်ဖြစ်သည်။ Xq သည်နှစ်များတစ်လျှောက်သိသာသည့်အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိပြီးအလားတူအလားအလာလည်းရှိသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် ၁၅ နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒီမှတ်ချက်များကြောင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကတော့ Rosalibert Maria Peralta Alba
ငါလွန်ခဲ့သော2လကငါယူ။ ငါ၌အလိုဆန္ဒမဆိုကြင်နာရှိသည်
ငါနဲ့ဆင်တူတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဆေးပြားကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါ။ သူတို့ကိုငါမသောက်တော့ဘူး ၁ နှစ်ကျော်အကြာမှာကျွန်မရဲ့လိင်ဆန္ဒကမပေါ်လာဘူး။ ဆရာဝန်တွေကငါ့ကိုမယုံဘူး၊ ဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုလို့ထင်ကြတယ်။ ငါ့ဒေါက်တာကိုငါမေးခဲ့တယ် သွေးစစ်တာနည်းတယ်၊ အဲဒီမှာသူတို့ကငါ့မှာရှိတဲ့ဆေးတွေကမကောင်းဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ ဂျယ်လ်ကို ၆ လကြာလိမ်းပြီးရင်ငါ libido ကိုပြန်ကောင်းလာတယ်။ မင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမထိခိုက်ခင်ခင်ဗျားဒီကိုအချိန်မီမြင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဂျယ်လီ ?? ဘယ်လိုဂျယ်လ်မျိုးလဲ။ ကောင်းစွာရှင်းပြပါ။ အလုပ်လုပ်လားဆိုတာကြည့်ဖို့ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ Aprilပြီလ ၄ လသာကြာပါပြီ။ သူတို့ကို faaaaa ကိုမယူခင်မှာကျွန်မရဲ့ရည်းစားနဲ့နေ့စဉ်အမှုဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ဆေးတွေနဲ့အမှန်တရားကိုစပြီးတခါတလေတပတ်တခါပါ။ ငါနင့်ကိုနင့်ကိုမချစ်စေချင်ဘူးနင်ငါ့ကိုနင့်ကိုမချစ်စေချင်ဘူးနင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ် ဒါက .. ဘာမှမရှိဘူး၊ ဘယ်သူမှဘယ်သူမှမတားဆီးနိုင်ဘူး၊ ခြင်္သေ့ကအိမ်ထဲဝင်လာတယ်၊ ပြီးတော့ငါ့ကောင်လေးကိုချစ်တယ်။ သူကငါ့ကိုလုပ်တယ်၊ ငါပြီးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး .. အပြင်အထွတ်အထိပ်ကငါ့ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အချိန်အကြာကြီး… ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ၀ င်လာတဲ့ဟော်မုန်းတွေ ... နို့မို့ဆို .. ရွှင်လန်းမှု!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီ၊ Aprilပြီလ ၄ လကိုသာယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို faaaaa ကိုမယူခင်ကကျွန်တော့်ရည်းစားနဲ့အတူနေ့စဉ်အရာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်ဆေးလုံးနဲ့စပြီးအမှန်တရားကတစ်ခါတစ်လေမှာပါ။ တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်သွားတော့ငါမခံစားရဘူး ... သူ့အနမ်းတွေနဲ့သူတို့ထိတာတောင်မှငါ့ကိုမကူညီဘူး ..။(( ပြီးတော့သူပြန်မဖြေနိုင်လို့စိတ်မကောင်းပါဘူး ... ဒါပေမယ့်ငါခံစားရတဲ့အခါ ငါ့ကိုရပ်တန့်နိုင်တဲ့ဘယ်သူမှမရှိ၊ ဘယ်သူမှမရှိဘူး၊ ခြင်္သေ့ကထွက်လာတယ်။ ကောင်လေးကအဲဒါကိုချစ်တယ်၊ သူကငါ့ကိုလုပ်တယ်၊ ငါပြီးအောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ... ပြီးတော့အရမ်းကြွယ်ဝတယ် !!! ငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲလို့တစ်ယောက်ယောက်ကပြောတယ်။ ပညာရှင်တွေကပြောတာကငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဟော်မုန်းတွေ ... နိုးနိုးကွားကွားနေရတာပါ။
အနောက်တိုင်းလင်းယုန် Fuentes Rios ဟုသူကပြောသည်
ငါထင်တယ်ငါတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမရှိခြင်း၏။ ငါတို့ယောက်ျားသည်အခြားနေရာများသို့မသွားနိုင်အောင်မိန်းမများအားပါးစပ်နှင့်စအိုဖြင့်အနုပညာဖြင့်သင်ကြားသင့်သည်။ ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားသည့်အမျိုးသမီးသည်သူမယောက်ျားအားအာမခံပေးပြီးသူသည်နှစ် ဦး သုံး ဦး အထိတန်ဖိုးရှိသည်။
aguila occiidental fuentes rios သို့စာပြန်ပါ
ငါဒီဆေးတွေကနေထင်ပါတယ် အားလုံး၌တည်ရှိ၏။ ။ ငါ qlaira သောက်ပြီးတော့သူတို့ကငါ့ကိုအံ့သြစရာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ .. နှင့်လွန်ခဲ့သော3လကဤပြwithနာနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ။ ကျွန်မခင်ပွန်းကငါ့ကိုလာတွေ့ရင်ကျွန်မဘာမှမခံစားရဘူး၊ အော်ဂဇင်ကိုရောက်ဖို့အချိန်အတော်ကြာခဲ့တယ်။ ။ သူတို့ကိုငါပြောင်းချင်လားဒါမှမဟုတ် IUD ကိုတင်ချင်လား။
ငါပြောချင်တာကငါဟာ ၂၅ နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးငါ့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းသူနဲ့အတော်လေးတက်ကြွနေတယ်။ ငါတို့မှာတစ်နေ့ ၄ ကြိမ်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့သူကဆေးလုံးကိုစတင်သောက်ခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာငါတို့ဆက်ဆံရေးဟာအဆုံးအထိဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘာလုပ်စရာမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခြင်းစတာပဲ။ ငါတို့အခုလက်တွဲပြီးပြီ။ ငါမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အသစ်ရှိပြီ၊ အားလုံးကောင်းတယ်။ သူမကငါနဲ့အတူရှိနေခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်သူမဆေးလုံးနဲ့စတင်ခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင်သူ့ကို ၂ ပတ်ကျော်ရှာဖွေနေသည်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်း သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းနှင့်အတူစတင်မပြုကြဘူးဒါကြောင့်အကြံဥာဏ်မိတ်ဆွေများအဖြစ်, အခြားနည်းလမ်းရှာ
အပူတပြင်း xD Att
အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကငါနဲ့ YASMIN BELARA ဖြစ်သလိုဂျီနီဗာပဲဖြစ်ပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးကာလကငါ့ကိုအမြစ်ကနေသေအောင်ပစ်လိုက်ပြီ။ ငါဒီရောဂါအားလုံးကိုငါမထားဘူး။ ငါအားလုံးကိုငါမထားချင်ဘူး။
မင်္ဂလာနေ့၊ ကောင်းသောမိန်းကလေးများ၊ ငါသန္ဓေတားဆေးအားလုံးတွင်ရှိသည်ဟုထင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤဆေးကို ၈ လသောက်ပြီးအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူနေထိုင်လိုသည့်ဆန္ဒကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်သော်လည်းအမှန်မှာကျွန်ုပ်သည် ငါဟာယောက်ျားလေးသုံးယောက်ရှိပြီးစက်ကိုရပ်တန့်ပစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ကြွယ်ဝတယ်၊ ငါမလိုအခြားကလေးရဖို့ကြိုးစားသည်၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားဟာဆေးလုံးအားလုံးမှာပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် ၂၃ နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားများကို ၅ နှစ်ကြာစီစဉ်ထားပြီး၊ တစ်နှစ်ခွဲလောက်အလိုဆန္ဒပျောက်ဆုံးနေပြီးကျွန်ုပ်သည်အကန့်အသတ်ဖြင့်ရှိနေပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏မီးယပ်အထူးကုကကျွန်ုပ်အား၎င်းတို့အားပြောင်းလဲရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် ၃ လအတွင်းရလဒ်များမရှိပါက။
ငါလေးနှစ်လုံးလုံးဆေးလုံးကိုသောက်ခဲ့သည်မှာအမှန်။ ကျွန်ုပ်သည် ortho ဇာတ်ကောင်ရှိခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်အား၎င်းတို့အားစွန့်ခွာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံရေးမရပ်တန့်သေးပါ။ ဟဟားဟားဒါကစိုးရိမ်စိတ်နဲ့တူတယ် .. ငါသူ့ကိုသေအောင်ထားခဲ့တယ် .. : p 😀
ငါအသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ ငါဆေးသောက်နေတယ်။ (၅) နှစ်လောက်ရှိတယ်။ အမှန်တရားကတော့သူတို့ဟာငါ့ကိုဘာမှမလိုချင်ဘူး၊ နေ့တိုင်းလန်းလာတယ်၊ လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်၊ ငါသူတို့ကိုငါယူခဲ့တယ်နေ့တိုင်းမွန်းတည့်ပြီးနေ့တိုင်းလှုပ်ရှားတက်ကြွစွာလှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ ဟားဟား ၃ ပတ်အကြာငါဆေးသောက်တဲ့ဆေးဘူးကိုသူတို့ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူတို့ကငါ့ကိုနေမကောင်းဖြစ်လို့ကွန်ဒုံးနဲ့ဂရုစိုက်တယ်။ ငါသည်ခြင်္သေ့ဟားဟားဟား Felizzz နှင့်ဟော်မုန်းကင်းစင်သည်ဟုခံစားရခြင်းမတိုင်မီအရာအားလုံးပြန်လုပ်ခဲ့သည်။ : p
မာရီယာ INES ဟုသူကပြောသည်
ငါသုံးနှစ်ကြာပါးစပ်တားဆေးကိုသုံးပြီးငါလိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စိတ်အရမ်းလျော့သွားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတိထားမိခဲ့တယ်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူနေရလို့ကိုယ်ခန္ဓာကဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုငါသတိထားမိလိုက်သည်။ ဆန္ဒရှိပေမယ့်ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ရမယ် ... နောက်လငါ pildra ယူပါလိမ့်မယ်။
MARIA INES သို့ပြန်ပြောပါ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ကံကောင်းတာကငါတစ် ဦး တည်းသာမဟုတ်! ငါတနှစ်ခွဲနီးပါးမွေးဖွားမှုအတွက်တားဆီးဆေးတွေကိုသောက်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကကျွန်မကိုစိတ်အပြောင်းအလဲမြန်စေခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများစွာဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းအပြင် ...
ငါသုံးနှစ်ဆေးလုံးကိုမယူကြဘူး။ ဒါကတကယ်တော့မတိုးတက်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုချစ်တယ်။ သူနဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိနေချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါသတိမထားမိလို့အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ သူ့ကိုငြင်းပယ်ပါ .. ပြitနာတွေအများကြီးဖြစ်စေတယ် .. ငါ့ကိုသင်သေချာနားလည်တယ်
ကျွန်ုပ်၏မီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသောအခါ၎င်းသည်အချိန်နှင့်အမျှတိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်ဟော်မုန်းအမျိုးအစားများကိုမရရှိတော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်အလိုဆန္ဒကိုပြန်မရပါ။ အရင်ကဲ့သို့ဖြစ်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ ငါအရမ်းစိတ်ပျက်အားငယ်သွားတယ်။ ငါ့ကိုစိတ်ပျက်စေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ ငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လည်းတစ်ခါတစ်ရံသူကသူ့ကိုငါမစွဲမက်ဘူးလို့ခံစားရလို့ ... ဒါပေမယ့်ယောက်ျားတွေကငါတို့တွေဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မတို့ခံစားရတာကိုနားမလည်ကြဘူး။ ဖတ်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကြံဥာဏ်ကိုလက်ခံတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် ၂၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကတည်းကကျွန်ုပ်သည်ဆေးပြားများကိုစတင်ယူခဲ့ကြပြီးကျွန်ုပ်၏ရာသီလာခြင်းအရောင်ကျဆင်းခြင်းကြောင့်အသည်းရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တစ်ခုတည်းသောဆိုးသောအရာမှာကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်အလိုဆန္ဒကျဆင်းလာခြင်း၊ အချိန်ကုန်သော်လည်းငါမှထိုနေရာမှပြန်လည်မရရှိနိုင်ဟုငါခံစားမိသည်။ လိင်သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုကိုမလိုချင်ပါကအခြားတစ်ယောက်ကထပ်တူခံစားရသလား။
Hawkers x Pull & Bear, ဖက်ရှင်မျက်မှန်များသည်စတိုးဆိုင်များကိုထိမှန်ခဲ့သည်